Waa maxay u jeedka ciidanka loogu daabulayo Baladweyne? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa maxay u jeedka ciidanka loogu daabulayo Baladweyne?
Ra’iisul Wasaaraha oo masuul ka ah hirgalinta doorashada, ayaa u muuqda inuu indhaha ka daawanayo boobka ay Famaajo iyo Fahad doonayaan in ay ka geystaan Baladweyne, halka hore loogu baraarugay in saraakiisha ciidanku aysan ka amar qaadan Wasiirka amniga.
BALADWEYNE, Soomaaliya – Ugu yaraan Saddex diyaaradood oo caasimadda looga daabulay boqollaal askari oo ka kala tirsan Gorgor iyo Haramcad, [Milateri & Boolis] ayaa maanta ka degay xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne.
U jeedka laga leeyahay daad-gureynta ciidankaan, ayaa ah in lagu boobo doorashada kuraas taalla magaalada, waxaana la filayaa in koox uu hoggaaminayo Agaasimihii hore ee NISA, eedeysane Fahad Yaasiin, ay maalmaha soo aaddan u socdaalaan Baladweyne.
Gorgor iyo Haramcad oo ah ciidan ay Farmaajo, Kheyre iyo Fahad, ka garab dhiseen, Milateriga iyo Booliska, si ay danahooda gaarka ah u meel-mariyaan, ayaa hore loogu adeegsaday boobka doorashooyinkii maamullada, GM, KGS iyo Hirhabeelle.
Waxa ay hore ugu lug-yeesheen, dagaallo siyaasadeed oo ka baxsan la dagaallanka Al-Shabaab, sida dagaalkii Baled-xaawo, ee horraantii sanadkii la soo dhaafay iyo midkii October ee ka dhacay Guriceel isla sanadkaas.
Ciidankaan lagu daabulay magaalada Baldweyne, ayaa waji hor leh u yeeli kara geeddi-socodka hannaanka doorashada oo la qorsheeyay in ka hor dhamaadka bisha Feberaayo la soo gabagabeeyo, sida ku cad war-mutiyeedkii bishaan ee Golaha Wadatashiga.
Sida uu qeexayo, qodobka 16-aad ee War-murtiyeedkaas Ciidamada ayaa lagu amaray in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha Siyaasadda, kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta Amniga Dalka iyo Dadka una hoggaansamaan dhammaan Shuruucda iyo xeerarka Dalka.
Ciidanka la geeyay Baladweyne, waxaa horkacaya Generaal Biixi oo ah sarkaal hore u geystay gabood-fallo xooggan, dhiig bandanna ku daadshay Shabeellaha dhexe, waxaana talaabadaanu caddeyneysaa in Farmaajo iyo Fahad wali ciidanka adeegsan karaan.
MW Hirshabeelle, Cali Guudlaawe, ayaa cagaha dhigi la’ Hiiraan, kadib markii inta badan dadka gobolku diideen doorashadii boobka ahayd ee uu ku noqday Madaxweynaha, waxaana gobolka ka aloosan xasarado siyaasadeed oo shaqsiyaad gaar ah falkinayaan.
General Abuukar Xaaji Warsame [Xuud], oo muddo dheer dagaal kula jiray Maamulka Hirshabeelle, ayaa dhawaan laga soo dajiyay caasimadda Muqdisho, kadib markii wada-hadal dhex maray isaga iyo Fahad Yaasiin.
Xuud, wali kama tanaasulin go’aankiisii ka dhanka ahaa Guudlaawe, hayeeshee, wuxuu isku dhiibay kooxda gobolka lug-goysay ee shanti sano ee la soo dhaafay hagar-daamada ku heysay reer Hiiraan.